( မျှော်တလင့်လင့် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( မျှော်တလင့်လင့် )	15
( မျှော်တလင့်လင့် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Mar 24, 2015 in Creative Writing, Poetry | 15 comments
သူ့ထံရောက်စေ သူသိစေ ၊
Kaung Kin Pyar says: အူးမျိုးရေ့
ဟို ဒက်စတော့ပေါ်က တစ်ယောက်ရော…ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငင်….။
တောင်ပေါ်သား says: တစ်ခါက တစ်ဘဝ တဲ့ ၊
ဂျင်းစိမ်း နဲ့ မိတ်သလင်
သူကြင် မှ ကိုယ်ကြင်မပေါ့ကွယ် ၊
တန်ဘိုးထားစရာလည်း ဘာနေရာမှ ရှိလာမှာ မဟုတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ​မျှော်​မ​နေနဲ့
ဗိုက်​ဆာရင်​၀ယ်​စား အဲ့ သူသိ​စေ့ချင်​ရင်​​တော့ ဖွင့်​​ပြောဗျ ။ ​ပေါ်တင်​ကြီး​တော်​မလုပ်​နဲ့ဗျ ။ မျှစ်​တို့ရဲ့ မာယာ အဲ့ ဒါ အနီးကပ်​ဆုံး( ကိုဘလက်​ ကြီးကိုဆရာတင်​ဗျာ ။ လိုအပ်​မယ်​ထင်​ရင်​ သူနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးပြီး ​အောင်​သွယ်​လုပ်​ ခိုင်း သိလား ) fb ထဲမှာ​တော့ အဲ့လို (……..) နဲ့ ​ရေးထားရင်​ ကာယကံရှင်​ မမြင်​ရဘူး ဆိုလို့ ကိုဘလက်​​ရေ ခညားမမြင်​ဘူး မို့လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကိုဘလက်ဗျူဟာက ဟန်ပါ့မလားကိုယ့်ဆရာရဲ့
ကချင်နုထွားကြီး sorrow ပြောသလို လက်ဖမ်းကိုင်ပြီး ရင်ဖွင့်ပလိုက်မယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: ခုထိမကိုင်ရသေးဘူးလား ..ညံ့ပါ့ဗျာ… အဓိကက ဇ ဗျ… ဇ …
ရဲရင့်သူတွေသာ အချစ်ခံရတယ်ဆိုတာ စကားပုံမဟုတ်ဘူး…ကိုယ်တွေ့ခင်ဗျ…. အဟိဟိ
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာရယ်
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျောက်စ် ကိုဂျီးမြိုး အသီးကွဲရင်…
မြှောက်ပေးတဲ့ ကချင်နုထွား တြားခံ…
ဒီကြားထဲ ရဲကိုကိုပြောသလိုဆို… ဟမ်မယေး…
တောင်ပေါ်သား says: ကိုကျောက်စ်ရေ
MICT ဝင်းက ကျုပ်အပိုင်ပါ ၊ လုံခြုံရေးတွေက ဘော်ဒါ ၊
ဒီတော့ကာ အဆောင်အပေါ်ထပ်တက်တဲ့ လှေကားမှာ
ဆွဲလိုက်ရင် ( လက်ကိုပြောတာနော် )
အင်းးးး အဆင်ပြေလောက်တယ် ၊ ဒုက္ခများရင်တော့ တရားခံ sorrow ပဲ ၊၊
Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: ဒီလိုခင်ဗျ…တစ်ဆင့်တော့လျော့လိုက်ပါအုံးမယ်.. အဟိဟိ
သူဌေးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်ခင်ဗျ….မြှောက်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာ …. အောင်မြင်တဲ့လူရှိသလို ..မအောင်မြင်တဲ့လူလဲရှိမှာပဲခင်ဗျ…. အခုကျော်ပြောတာက ကျော်အောင်မြင်ဖူးတယ်… လုပ်ကြည့်…
ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ ကိုယ့်ကံပဲ …. လုပ်ရဲရင် ရရင်ရမယ်..မရရင်မရဘူး … မလုပ်ရဲရင်တော့ ဘာဆိုဘားမှမရဘူး … အဟိဟိ…ပြောပြီးပါကော … ရဲရင့်သူတွေသာအချစ်ခံရတယ်လို့ …. 100 % အောင်မြင်မယ်မပြောဘူး…. အမငီး…ဒုက္ခများရင်တော့ တရားခံ sorrow ပဲ ..အောင်မြင်ရင်ကျတော့ ဘာလာမှာတုန်း…အဲ့ဆို…အဟိဟိ
တောင်ပေါ်သား says: အောင်မြင်ရင် ခင်ညားကိုပါခေါ် ၊ ဟိုလေယာဉ်မယ်လေးပါတဲ့လေယာဉ်ကိုစီးပြီး
ငါတို့စုံတွဲက လကမ္ဘာ အဲ အဲလေ မှားလို့ စင်္ကာပူမှာ ပျားရည်သွားသောက်မယ် ၊ ပျားရည်ဆမ်းတာက ရိုးသွားပြီဟ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟမ်မယေး… တတိယအရွယ်၏ ဒုတိယဝေဒနာ… ဟုတ်ပေါင်…
ဒုတိယအရွယ်၏ တတိယဝေဒနာကလည်း လန်ထွက်နေတာပဲ…
အားပေးဒယ် ကိုဂျီးမြိုး… အားဟိ
sorrow says: Marina bay sandsထိပ်က ရေကူးကန်မှာ … ပျားရည်ခွက်လေး ကိုယ်စီကိုင်ပြီး …ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်မယ့်အမျိုး ….အဟိဟိဟိ ..
အစ်ကို..အိပ်မက်ကကြီးတာသေးတာ အရေးမကြီးဘူး..မက်ရဲဖို့က အဓိက …
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာခင်ဗျာ Was this answer helpful?LikeDislike 12067
Alinsett@Maung Thura says: ဟောဒီတစ်သက် ဆက်ဆက်မခွဲခွာ
ဆိုတော့ … ကျနော့်ကို မခွဲသွားရဘူးနော်..
အန်တီ မေနှင်းကိုလည်း မေးလိုက်ဦး…ဆက်ဆက်ကို လမ်းတွေ့ရင် ဂဲနဲ့ လိုက်ထုချင်နေသေးလားလို့..
တောင်ပေါ်သား says: မားသားက အင်းတော် ဗန်းမောက်ဘက် ဟောပြောပွဲထွက်နေတယ် ၊
အပြန် မန္တလေးမှာ နိူဘယ်မြန်မာဟောပြောပွဲဆိုလား ဝင်ရဦးမှာ
လဆန်းမှ ပြန်လာမှာမို့ ကျုပ်ခမျာ မိုးလင်း မနက်စာချက် ရုံးအပြန် ဈေးဝင် ချက်ပြုတ် စားသောက်အိပ်နဲ့
အလွမ်းအိပ်မက်ထဲမှာပဲ သူ့ကိုတွေ့နေရတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.